> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos & Videos ka HTC dhiirrinaya
Ma suroobi karaa waddo in undelete files ka HTC dhiirrinaya?
Just ogaaday inaan qalad ah tirtiray sawir ka card SD ee aan HTC dhiirrinaya. Kaarka waa wax weyn oo weligii ku dhow yahay inuu ka buuxsamay sidaas darteed waxaan la yaabanahay hadii ay jirto gal tirtiray on card ama qaar ka mid ah habka inuu ka soo kabsado faylka?
Guud ahaan, haddii aad si toos ah uga HTC dhiirrinaya tirtiray files, ma jiraan wax "recycle bin" meel si loo badbaadiyo kuwa files tirtiray. Laakiin taas macnaheedu ma aha weligiisba aad iyaga laga badiyay. Marka aad tirtiray file ah oo ka HTC dhiirrinaya, file kaliya ee ay astaan ​​u ah sida "tirtiray" kaadhka SD ah. Waxaa weli waxaa lagu heynayo idin ​​files cusub si ay u overwrite. Sidaa darteed, weli waxa aad u soo kaban karto, la soo kabashada HTC dhiirrinaya barnaamijka.
Weli dooran jirin ee waxa HTC dhiirrinaya kabashada xogta barnaamijka in ay isticmaalaan.? Halkan aan soo jeediyo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac haddii aad isticmaalayso Mac OS. Labada barnaamij ayaa trustable oo wax ku ool ah, ayna u oggolaadaan in aad ka bogsato sawirada, video iyo files audio ka phone HTC dhiirrinaya, iyadoo aan loo eegayn aad tirtiray, formatted ama iyaga lumay ay sabab u tahay sababo kale.
Isku day version maxkamad free of this software kabashada HTC dhiirrinaya hadda hoos ku qoran.
Fiiro Gaar ah: Waxa ugu muhiimsan: HA qor wixii macluumaad cusub marka aad badiyay files ka HTC dhiirrinaya, iskaga overwriting xogta asalka ah.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray photos / video ka HTC dhiirrinaya
Step1. Burcad barnaamijka HTC dhiirrinaya kabashada xogta
Connect telefoonka HTC dhiirrinaya in computer ka hor inta aad heli kartid bilaabay, iyo in la hubiyo waxa ay u muuqataa sida warqad drive ee "My Computer" a. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji "Start" ee suuqa kala hoose soo socda.
Step2. Dooro telefoonka HTC dhiirrinaya iyo iskaan
Hadda, doorato telefoonka HTC dhiirrinaya oo guji "Scan" si ay u baadhaan files lumay ee aad taleefan. Haddii aad rabto in aad kaliya inuu ka soo kabsado qaar ka mid ah faylasha gaar ah, waxaad kala miiri karaa natiijada scan oo isticmaalaya "Filter Options".
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray photos, videos ka phone HTC dhiirrinaya
Scan ka dib, dhammaan faylasha recoverable aan loo eegayn tirtiray, formatted ama lumay ay sabab u tahay sababo kale, waxaa laga helaa oo soo bandhigay. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi in ay iyaga oo dhan soo kabsadaan ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday ah ee aad taleefan HTC dhiirrinaya. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada xogta HTC dhiirrinaya